Hamro Kantipur | सम्झनामा मदन भण्डारी र त्याे कालाे दिन,अनिअहिलेसम्म रहस्यमय बनेकाे यथार्थ सम्झनामा मदन भण्डारी र त्याे कालाे दिन,अनिअहिलेसम्म रहस्यमय बनेकाे यथार्थ
सम्झनामा मदन भण्डारी र त्याे कालाे दिन,अनिअहिलेसम्म रहस्यमय बनेकाे यथार्थ
हरेक जनताको ढुकढुकिमा थिए नेता मदन भण्डारी तर जब अत्यास लाग्दाे घटना घट्यो विडम्बना एउटै जिपमा सभार ड्राइभर बाचे तर नेता भण्डारीकाे मृत्यु भयाे बाँचिरहेको भए नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले असार १४ मा ७० औं जन्मदिन मनाउने थिए । २८ वर्षअघि अर्थात् २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा सहयोद्धा जीवराज आश्रितसहित ज्यान गुमाएका भण्डारीको राजनीतिक जीवन छोटो भए पनि ‘चामत्कारिक’ रह्यो ।
जनताको बहुदलीय जनवादको नवीन सिद्धान्त र धाराप्रवाह भाषणको छाप र रापताप अद्यापि छँदै छ । नेपालको वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अविस्मरणीय नेता भण्डारीको निधनलाई नेकपा एमालेले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको सुनियोजित योजनामा ‘हत्या’ गरे पनि सरकारी छानबिन आयोगले ‘जिप दुर्घटना’ मात्र मान्यो । दासढुंगा काण्डका नाममा चार वटा आयोग गठन भए । सरकारको तर्फबाट पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिल आयोग बन्यो ।
एमालेका तर्फबाट तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओलीको एकल आयोग बन्यो भने जनस्तरबाट पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा अर्को आयोग बन्यो । अनिल आयोगको प्रतिवेदन चित्त नबुझेपछि एमालेले देशव्यापी आन्दोलन गर्यो । तत्कालीन न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको अध्यक्षतामा चौथो आयोग पनि बन्यो । तर यी कुनै पनि आयोगले विश्वसनीय प्रतिवेदन दिएनन् । पार्टीबाट बनेको ओली आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म ‘गोप्य’ नै छ । त्यो प्रतिवेदन अहिले कहाँ छ ? कसैलाई थाहा छैन । केन्द्रीय कार्यालय बल्खुको लाइब्रेरीमा समेत भेटिएन । ‘हत्या’ र ‘दुर्घटना’ को पहेलीबीच मदन-आश्रित काण्ड ३ दशकसम्म ‘रहस्य’ मै छ । यो समाधान निकाल्नै नसकिने रहस्य हो या रहस्यमा राखेजस्तो मात्र गरिएको हो ? सर्वसाधारणको उत्सुकता छ ।
घटना विवरण अनुसार मदन भण्डारी र आश्रित एमाले, कास्की जिल्लाको तेस्रो अधिवेशन उद्घाटन गरेर चितवन फर्किंदै थिए । आँवु खैरेनीसम्म गोरखा जिल्ला कमिटीका सचिव ऋषि कट्टेल पनि थिए । सिमसिमे पानी परिरहेका बेला मुङलिनमा सडकको झुपडीमा उनीहरुले चिया खाए । त्यसपछि जिप दासढुंगा सडकको दाहिनेपट्टिबाट १५० फिटमुनि त्रिशूली नदीमा खस्यो । घटनापछि आश्रितको शव गाडीमै भेटिएको थियो भने भण्डारीको शव घटनास्थलदेखि अलि तल नारायणी नदी किनारमा तीन दिनपछि भेटिएको थियो । घटना लगत्तै एमालेको एकल सरकार बन्यो । अहिलेसम्म एमाले नेताको नेतृत्वका पाँच वटा सरकार बनिसकेका छन् । हाल भण्डारीकी धर्मपत्नी दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रप्रमुख र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री रहेका छन् । तर मदन-आश्रित काण्डको गम्भीर अनुसन्धान गरी यथार्थ रिपोर्ट बाहिर ल्याउन कुनै कदम चालिएको छैन ।
अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगेका घटनाका एक मात्र जीवित साक्षी रहेका चालक अमर लामाको २०६० साउन ११ गते कीर्तिपुरमा रहस्यमय हत्या गरियो । तत्कालीन माओवादीले घटनाको जिम्मेवारी लिएको थियो । अमर लामालाई किन खेदीखेदीकन हत्या गरियो ? प्रश्न निरुत्तर छ । घटनालाई ‘रहस्यमय’ भन्ने एउटा बलियो आधार थियो- जिप खस्यो तर ड्राइभर बाँचे । चालक लामाको बयान अनुसार उनी पनि सँगै खसेका थिए । तर पौडिएर निस्किन सफल भए ।
तल गाडीमा बजारिंदै झर्दा पनि उनको शरीरमा किन चोट लागेन ? अर्को कुरा- सजिलो बाटोमा गाडी एक नम्बर गियरमा र फोर-ह्विल न्युट्रलमा राखेर किन चलाइएको थियो ? दासढुंगाको घटना प्रकृतिमा भुस बालुवाका धार आदि त शंकास्पद थिए नै । त्यसैगरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि शंकास्पद नै रह्यो ।
पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मदन भण्डारीको सास अवरुद्ध भएर मृत्यु भएको उल्लेख छ । तर यतिका भरमा ‘हत्या’ मान्न प्रमाण पुग्दैनन् । नेपालको इतिहास षडयन्त्र नै षडयन्त्रको पुलिन्दा मान्नु एउटा कुरा हो । मदन-आश्रितको मृत्युलाई सधैंभरि ‘मिस्ट्री’ बनाइरहनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।